Ny Playboy Indonezia sy ireo Hevitra Roa Mifanipaka · Global Voices teny Malagasy
Ny Playboy Indonezia sy ireo Hevitra Roa Mifanipaka
Voadika ny 12 Desambra 2018 11:31 GMT
Misy valinteny roa mahaliana izay mifanipaka tanteraka mikasika ilay fanontana faharoa ny Playboy Indonezia, izay navoaka tao amin'ny biraony vaovao tao Bali. Mihevitra i Budi Putra fa ”mahiahia kokoa” ilay fanontana faharoa:
Manome votoaty sahisahy kokoa nóho ilay voalohany ny fanontana, izay nikapoka ireo tranoheva fivarotan-gazety manerana ny firenena tamin'ny Alarobia.
Raharaha mampisy adihevitra eo amin'ny fenitra napetrak'ilay boky Amerikana loharano ny fanontana voalohany tamin'ny 7 Aprily, miaraka aminà nofo tsy dia miseho kokoa nóho ny any amin'ireo morontsiraka maro, anatin'izany ireo tany amin'ny Nosikely Bali ao Indonezia, na nóho ny any anatin'ireo gazetiboky maro efa amidy manerana ny firenena.
Momba ny antony iatrehan'ny Playboy fanoherena be ao Indonezia:
Na izany aza, niteraka fanoherana mafy tao Indonezia, izay firenena Silamo be mponina indrindra maneran-tany, ny herin'ny anaran'ny Playboy noho izy mariky ny fitondrantena tandrefana mahazo aina kokoa manoloana ny firaisana ara-nofo.
Etsy an-daniny, ny mifanohitra amin'izany no tsapan'i Rendy Maulana. Milaza izy fa mahatsiaro sambatra nahazo ilay fanontana faharoa ary amin'ny heviny, tsy misy zavatra mamoafady mihitsy ao anatin'izany, raha oharina amin'ny gazetiboky toy ny Maxim sy ny FHM aloha, izay efa hita mialoha tao Indonezia ary tsy miteraka adihevitra na dia kely aza.
Mitsetra ireo birao fanontana ny Playboy Indonezia mihitsy aza izy, noho ireto farany tsy maintsy mamindra ny biraony ary tsy sahy akory mampiseho dokambarotra noho ny tahotra an'ireo fandrahonan'ny Silamo mahery fihetsika.
Toa mitondra ny hevitry ny taranaka tanora Indoneziana izay manohana ny fahafahana feno i Rendy Maulana sy ny maro amin'ireo mpaneho hevitra ao amin'ny blaoginy, raha oharina amin'i, ohatra, i Budi Putra, ny heviny izay afaka mijery amin-kahendrena ny antony lalina nahatonga ilay adihevitra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.